● 100% am-boalohany avy MS activition anaty aterineto, araka ny lalàna manan-danja
● fanalahidy izay azo ampiasaina maharitra dia tsy mila miahiahy momba ny ho voasakana
● Vita avy any Etazonia azo namboarina. Tsy afaka manao na inona na inona tianao
Fampahavitrihana: By Internet
Fanamarinana: MS Partner
Fiteny: Anglisy / Koreana
Fonosana: FPP Varotra
Microsoft Office 2016 Standard Irlandy Original 1User 1SP Fametrahana DVD sy Key Card
Key Teny: biraon'ny 2016 Standard, 2016 Standard,
Etazonia / Hong Kong / Singapore / Irlandy
Factory voaisy kase Retail boaty
100, 000 Pcs / Volana
Microsoft Office 2016 dia manampy anao hanao ny tsara indrindra ny asa - na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny olona. New, ankehitriny dikan 'ny mahazatra biraonao fangatahana, Teny, Excel, PowerPoint, Outlook, sy OneNote, dia naorina ho an'ny vokatra ambony indrindra. Mamokatra haingana ianao matihanina tahirin-kevitra amin'ny lafin-javatra manan-karena ny fanoratana, famolavolana fanaraha-maso ho an'ny Pixel-tonga lafatra sy intuitive fandrindran-takila fitaovana hanampy anao hanao indrindra ny tahirin-kevitra. Ianao mahazo ny tahirin-kevitrao eo amin'ny rahona isaky ny mila azy ireo ianao. Amin'ny antontan-taratasy voatahiry an-tserasera, dia mora ny mahazo ny ekipa eo amin'ny pejy ihany. Share, ankehitriny ary miara-miasa eo amin'ny tetikasa ao amin'ny ekipa miaraka amin'ny fiaraha-miasa naorina fitaovana manerana ny tariny.
System fepetra takiana
Processeur: 1 gigahertz (Ghz), na haingana x86 na processeur x64-bit amin'ny SSE2
Operating System: Windows 7 na tatỳ aoriana, Windows Server 2008 R2, na Windows Server 2012
Hard kapila Space: 3.0 GB kapila misy toerana
Display: 1024 × 576 vahaolana
Graphics: Graphics fitaovana haingana mitaky DirectX 10 sary karatra
Multi-mikasika: A mikasika-fitaovana dia takiana afaka hampiasa rehetra mikasika multi-miasa. Na izany aza, miasa rehetra sy ny endri-javatra dia misy foana ny fampiasana ny keyboard, totozy, na fitsipika, na mora fahan'ny fitaovana. Mariho fa ny vaovao mikasika ny endri-javatra dia optimisé ampiasaina amin'ny Windows 8 na tatỳ aoriana.
Fepetra fanampiny: Internet miasa dia mitaky fifandraisana Internet. Microsoft kaonty ilaina.
Manan-danja indrindra Aspect:
Fantatray fa efa nitady tsara, mafy orina, fanalahidy tany am-boalohany, dia Manantena izahay fa tsy ho voafitaky ny mora vidy, Shoddy raharaha any an-tsena. Ny fantsona famatsiana rehetra avy MS, dia ny fiantohana, fa tsy ny tena manan-danja sy manan-danja mifangaro ny sandoka.
Ka mba ho azo antoka fa ny mpanjifa rehetra ao amin'ny orinasa mba hividy vokatra mpanjifa dia afaka matoky tanteraka isika, ka izay mahasoa ny mpanjifa dia tsy ho simba. Misaotra anareo ihany koa noho ny faharetanareo amin'ny famakian-teny sy ny fampidirana ny vokatra.
Fanantenana azo hifandray antsika, mino aho fa ianao dia hahazo tsara orinasa mpiara-miasa, Dia toy izany ny toetra ny fanananareo ho antoka.
Office 2016 Fa MAC